Zim opposition ups the ante
Thursday 15 August 2013 - 11:50am
Outgoing Prime Minister Morgan Tsvangirai is contesting the poll results and demanded the commission be ordered to provide verified votes in each district and copies of voters' lists. Photo: AFP
HARARE - Attorneys for Zimbabwe's opposition leader say they have filed a court suit to try to compel the state election commission to release full details of the disputed July 31 election.
The opposition wants the details to corroborate claims that up to one million eligible voters were prevented from voting and that ballots were cast in the names dead people and voters out of the country.
Cabinet praises 'successful' Zimbabwe poll
Cabinet has congratulated Zimbabwe on its "successful harmonised" elections last month.
Zimbabwe secret deal exposed
In a move that would upset European Union countries, Zimbabwe has reportedly struck a secret deal to supply uranium to Iran.
Zimbabweans 'denied fair chance to vote'
Nearly 305,000 Zimbabwean voters were turned away and 206,000 received assistance from election officials during last week's disputed vote, organisers say.